Toyota Wish 2012 အား အောင်မြေသာဇံ တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Wai Yan Shein Htet
ဝယ်စရာကားပေါပေမယ့် ဈေးမှန်ပြီးကားကောင်းရဖို့က ခတ်ပါတယ်။အခုရောင်းမှာပါ မိသားစုကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့်နဲ့ ခရီးသွားလို့ကောင်းပြီး လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ wish ပါ။ Modified ဆိုပြီးဒီမှာပေါက်တတ်ကရတွေလုပ်ထားတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဂျပန်ကတည်းမိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း တစ်ခါတည်း ဖိုင်းလာပြီးသားဆိုတဲ့အကြောင်းစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နဲ့ အထောက်အထားခံလုံစွာပါရှိပါတယ်။ Grade 4B နဲ့သွင်းလာပြီး grade မြင့် kilo နည်းပြီး အတိုက်အခိုက် ပစ်ချက်မရှိတဲ့ကားကောင်းတစ်စင်းပါ ။ နားလည်တဲ့သူခေါ်ပြ grade က S grade အမှန်ကိုမှ ADO MILLE-SHON AERO ကိုဖြစ်တာပါ။ S အမှန်ဆိုတာက စတီယာတိုင်ကြိုးချုပ် ဂီယာကြိုးချုပ်4Disc brake .စပီကာ 6လုံး (ခုံသုံးတန်းကိုမှ နောက်ဆုံးခူံက ဘေးဘောင်အထိပါ) ECO.နှစ်ထပ် နဲ့ sport mode ပါ။ VCS . Back wiper sensor . Push start ဖြစ်တဲ့ဟာရယ် မဖြစ်တဲ့ဟာရယ် နှစ်မျိုးလာပါတယ်။2012 မော်ဒယ်
Kiko7သောင်းကျော်
S Grade ADO Mille-ShonAero
ORIGINAL TV. BACK CAM AND PIONEER 3သိန်းခွဲတန် TV ပါထည့်ထား
ORIGINAL MODIFIED SKIRT ပတ်လည်။
1.8 CC valve matic Engin မှတ်ချက် အတိုက်အခိုက်မရှိ နောက်ဆေးမပါ။ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပါမည်။ ဈေး က 380 ပါ။